I-Instagram ngqo, Funda ngoku! Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Ngqo kwi-Instagram, Funda ngoku!
NgoFebruwari 14, 2019 0 IiCententarios 712
Isidingo sonxibelelwano sidlulile ngophuhliso lwe ubuchwepheshe obutsha. Kungenxa yoko le nto ukunyuka kwezonxibelelwano kuzisa ulwaneliseko kwinani elikhulu labantu. Elinye lawona qonga libaleleyo ngabemi behlabathi yi-Instagram. Isekwe kupapasho lweefoto ozifumanayo ukuba zimnandi kwaye ufuna ukwabelana ngazo. Nangona kunjalo, kuhlaziyo oluziswe yi-interface lwongezwa kumandla Thumela imiyalezo yabucala. Ngale ndlela, abasebenzisi banokuba kunxibelelwano nokuba kukude kangakanani. Yiyo loo nto i-Instagram ngqo iceliwe malunga nomhla wangoku.
I-Instagram kwinethiwekhi yokuphuhlisa intanethi esele izisa Iminyaka ye-10 kwimarike. Iyaziwa ngokuba yindawo yayo entle kwaye inomtsalane apho umsebenzisi kufuneka akwazi ukuziveza ngokwakhe ngemithombo yemultimedia. Umxholo onjalo unokuba imifanekiso okanye iividiyo ezimfutshane ezinokuhlelwa kwaye ziphuculwe ukuze zibukelwe kakuhle. Ukongeza, inethiwekhi ebhengeziweyo izenzele uluhlu lwezixhobo ezenza ukuba umsebenzisi ayifune ngakumbi.
Imiyalezo engqalileyo ye-Instagram a isixhobo esibaluleke kakhulu iphuhliswe sisicelo. Ngale nkqubo, abasebenzisi banokusebenzisa inethiwekhi ukuthumela imiyalezo nge ulwazi kunye nomxholo wemultimedia kwabanye abantu kwinethiwekhi. Umxholo we-multimedia ungasekelwa kwizinto ezinemifanekiso okanye kwiividiyo ezimfutshane ubude bomzuzu omnye.
Ukusetyenziswa ngokuthe ngqo kwe-Instagram kufuneka kuvumele ukwabelana ulwazi lwabucala phakathi kwabasebenzisi Unokwabelana nangemathiriyeli epapashiweyo ofuna ukubonwa ngomnye umntu. Imiyalezo eqongeni Babangele ukuvuseleleka ngokuhlaziya kwabo okungagungqiyo kunye nobukho bobuchule ngendlela enkulu. Ngapha koko, kuhlaziyo lwamva nje kunokwenzeka thumela amabali nomda weembono ezimbini.
Kutheni usebenzise iDirect Instagram?
Izizathu zokusebenzisa ngokuthe ngqo kwi-Instagram ziyahluka. Abanye abasebenzisi bayisebenzisela ezabo ngokukhawuleza kunye nabanye intuthuzelo. Oko kuqinisekisiwe kuko isalathiso esisebenza kakuhle, kuba ngqo kwi-Instagram ukuqiniseka kokufika akunakuze kwenzeke.
Kukho abasebenzisi abaninzi abasebenzisa le ndlela ukuya wabelane ngolwazi okanye qala incoko nomnye umntu. Oku kungenxa yendlela ehambelanayo yesicelo ukuba ukwazi thumela imiyalezo. Isibonisi sayo esilula nesilula sesinye sezizathu eziphambili zokutsala.
Ngokusebenzisa ngokuthe ngqo imiyalezo ye-Instagram kunokwenzeka ukuqinisekisa ubunyani babo obugqwesileyo. Kuyinto ethandabuzekayo thumela imiyalezo ngokusebenzisa isicelo, kuba ungaqiniseka ngokufika kwe umyalezo kumsebenzisi onqwenelekayo. Akusayi kubakho zinto zangaphandle ezinokuthintela ukufika okanye ukuphuma komyalezo, ngaphandle konxibelelwano kwinethiwekhi I-Wi-Fi okanye idatha yeselfowuni.
Ukuthumela kwe-Instagram ngokuthe gca une isantya esikhawulezileyo eyenza ukuba ibe nomtsalane ngendlela emangalisayo. Nje ukuba umsebenzisi acofe i icon thumela i umyalezo othunyelweyo izakufikelela ngokuzenzekelayo kumamkeli. Ezi zibini kufuneka zikwazi ukuyijonga kwaye ithumele impendulo ngokuchanekileyo nge-Direct Instagram.
Eyona ndawo inomtsalane kwi-Direct Instagram ilele kwiintlobo zemxholo ezinokuthi zithunyelwe ngokuphakathi. Esi sixhobo siluncedo sivumela i envío Isicatshulwa ngokubaluleka ngasese okanye koluntu; nangona kunjalo umxholo weendlela ezahlukeneyo zemultimedia. Ngaphakathi kwezi fomathi amandla aya kufuneka afumaneke Yabelana ngemifanekiso okanye imifanekiso, kunye neevidiyo ezimfutshane. Ngale ndlela kuya kuba nako ukwaba umzuzwana othile nomntu onqwenelekayo. Ukongeza olunye uhlaziyo lwamva nje luvumela ukuthunyelwa kwe amabali kawonke-wonke okanye isetyenziselwa abanye babucala kuphela.
Inqaku elithile le-Direct Instagram lilele kuyo isiqinisekiso sokubonisa Ukusukela, xa umyalezo uthunyelwe kwaye ufumana, iqonga kufuneka lazise abathunywa, nge icon ephantsi komyalezo, xa umxholo ubonakalisiwe. Ngale ndlela, umntu lowo kuya kufuneka azi ukuba umyalezo wakhe ufundiwe okanye wabonwa nini, kwaye ukuba uthathe isigqibo sokuphendula ngabom.
Uyithumela njani i-Instagram ngokuthe ngqo?
Inkqubo yokuthumela ngqo i-Instagram ilula kwaye ifikeleleka ngokulula. Okoko emva kokufaka isicelo umsebenzisi uya kufuneka azalise uthotho zamanyathelo alula.
Ukuze uthumele i-Instagram ngokuthe ngqo, umsebenzisi kufuneka afikelele kwi itreyi yomyalezo Ukwenza oku, kuya kufuneka ucofe i-icon yephepha lendiza kwikona ephezulu ngasekunene kwe isikrini sasekhaya yesicelo Ngale ndlela uya kuba nokufikelela kwimiyalezo ebithunyelwe ngaphambili kunye efunyenweyo.
Xa ibhokisi yomyalezo sele ifikelele, kufuneka ucofe ithebhu Umyalezo omtsha. Ngale ndlela ungabhala umyalezo kumamkeli ongazange uqalise incoko naye. Ukwenza oku, kufuneka ubeke lesiteketiso okanye igama lomamkeli lowo ufuna ukuthumela umyalezo kuye. Okanye ukusilela oko, kuya kufuneka ukhethe enye izingxoxo ezindala, ukuba sele uthethile nomnye umsebenzisi malunga nesicelo.
Njengonobumba oqhelekileyo okanye umyalezo, ulwazi olufuna ukuthunyelwa kufuneka lubhalwe. Ukucetyiswa ukusebenzisa a umyalezo ocacileyo nochanekileyo Ngowakho unyanzeliso oluhle. Ngendlela efanayo unokukhetha umxholo we-multimedia ukuba uthumele ukuba unqwenela. Nje ukuba kwenziwe, kufuneka ucofe "Thumela" kwaye uyakube uwugqibile umsebenzi.
3 Kutheni usebenzise iDirect Instagram?
3.2 Ukusebenza kakuhle
4 Uyithumela njani i-Instagram ngokuthe ngqo?
4.1 Ibhokisi yomyalezo
4.2 Umyalezo omtsha
NgoFebruwari 14, 2019
Khuphela amabali e-Instagram i-iPhone
I-Instagram pc ngqo, ungayiphosi!